Ukulinganisa, ukuphononongwa kunye neenjongo zabathengi | Martech Zone
Ukulinganisa, ukuphononongwa kunye nenjongo yomthengi
NgoLwesine, Meyi 5, 2011 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Kwiveki ephelileyo, bendonwabile ukudibana nokuthetha kunye UJeff Quipp yeeNjini zoPhando zaBantu, i-SEO kunye ne-Intanethi yentengiso. UJeff umodareyitha iphaneli kumanqaku, uphononongo kunye nemithombo yeendaba kwezentlalo endandikuyo Khangela uMdibaniso weNtengiso kunye neNkomfa ye-eMetrics eToronto kunye UGil Reich, VP yoLawulo lweMveliso kwi Iimpendulo.com.
UJeff uvelise isitshixo esinye-injongo yondwendwe, into esoloko sizama ukuyiqonda njengoko sisebenza kunye nabaxhasi ukuphucula indawo zabo zokukhangela kunye nokuguqula. UJeff wawahlulahlula la macandelo mabini kuqwalaselwe kwaye ukucinga abathengi kwaye baxoxa ngempembelelo yamanqanaba kunye nokuphononongwa. Uphononongo olubi lube nefuthe elikhulu ekuziphatheni kokuthenga. UJeff ubhekisele kuphando ngoPhando oluKhanyayo kwi2011:
Iipesenti ezingama-62 zabathengi bafunda uphononongo kwi-intanethi phambi kokuba ukuthenga.
Iipesenti ezingama-62 zabathengi ekuhlolisiswe kubo abathembekileyo omnye Izimvo zabathengi.
I-58% yabathengi iphonononge izimvo ezithembakeleyo ezivela ebantwini Wayesazi.
Iipesenti ezingama-21 zabathengi ekuhlolwe kubo zathi ukujongwa kakubi okungama-2 utshintshile iingqondo zabo.
Iipesenti ezingama-37 zabathengi ekuhlolwe kubo zathi ukujongwa kakubi okungama-3 utshintshile iingqondo zabo.
Kuphela sisi-7% sabathengi abaphendukele kwinethiwekhi yabo yokujonga kwakhona, abanye baphendukela kwiindawo zokuthelekisa kunye zeenjini.
Unokucinga ngokulinganisa kunye nokuphononongwa njengalo naliphi na iphepha elineenkwenkwezi kunye neempendulo ezingaziwayo ezivela kubasebenzisi ... kodwa uJeff wacela umngeni kubaphulaphuli ukuba bacinge ngaphaya koko:
Youtube amakhonkco, izinto ozithandayo kunye nezimvo zichaphazela isikhundla sevidiyo.
Iziphumo zeshishini lendawo kwiinjini zokukhangela (Bing, Uphando) uneengxelo ezinxulumene noko. Inani lokuphononongwa, ukuphindaphinda kunye nokuphindaphindwa kovavanyo kunokuchaphazela amaxabiso okucofa. Iinjini zokukhangela zikwatsala amanqaku kunye nokuphononongwa kwezinye iisayithi zokuphononongwa kwiqela lesithathu njengeYelp.
Uphendlo lomntu olwenziwe nguGoogle likuvumela ukuba ususe indawo kwiziphumo zophando. Ngaba loo nto iya kuba nefuthe kwinqanaba lendawo xa abantu abaninzi bebeka phantsi? Kusenokwenzeka.
Ukulinganisa kunye nokuphononongwa ayisiyiyo yonke intshabalalo kunye nobumnyama kwiinkampani ezijamelene nengxelo engalunganga kwi-intanethi. I-33% yabo bafumene impendulo kwinkampani ngenxa yokuphononongwa kakubi uthumele uphononongo oluchanekileyo. I-34% isusile uphononongo lwabo olubi ngokupheleleyo!
Umboniso kaJeff wawubanzi-uthetha ngokusetyenziswa kweselfowuni kunye namanyathelo kaGoogle okubandakanya incoko zemidiya yoluntu ngokuthe ngqo kwiziphumo zokukhangela. Isifundo kwezi nkcukacha-manani, ewe, kukuqinisekisa ukuba usebenza ukukhuthaza iinkampani zakho kwi-intanethi. Cela abathengi bakho ukuba bakunike uphononongo kwaye ubabonise indlela yokuzihambisa. Phendula kwaye uthomalalise imiba ekhokelele kuvavanyo olubi ukuze uzibuyisele umva ezo meko.
Ukungabikho kokujongwa kwakhona kunye nokuphononongwa okungalunganga kunokuguqula umthengi oza kubakho. Jonga ngaphaya kwendawo yakho kwaye ujonge igama lakho kumgangatho kunye nokuphononongwa kweendawo. Ziza kuba nefuthe ekuziphatheni kokuthenga.
tags: 2011iimpendulo.cominjongo yomthengigil Reichijeff quippUkuphononongwa kwezibaneukulinganisaukulinganisa kunye nokuphononongwaReviews
Ukuhlalisana ne-imeyile yakho yokuTyikitya ngeWiseStamp
Ngaphandle kwezixhobo ezifanelekileyo…
Meyi 6, 2011 kwi-2: 44 AM
Kutshanje ndifumene i-imeyile evela kwishishini lokulungisa iimoto endilisebenzisayo. Ishishini elincinci, indawo enye esele iqalile ukusebenzisa ukuthengisa kwi-intanethi. Banikezela ngekhuphoni ye-10 yeedola malunga nokulungiswa kwexesha elizayo ukuba ndingathumela uphononongo malunga nomsebenzi wam wamva nje wenkonzo kunye nabo. Isipho sasifike ngexesha elifanelekileyo, safika ngaphantsi kweveki emva kotyelelo lwenkonzo. Yayilunikezelo lwexesha elinye kuphela, kwaye ndacinga indlela elungileyo yokundifumana kwindawo yabo.